PressTV-S African opposition seeking to dissolve parliament
S African opposition seeking to dissolve parliament
Wed Aug 9, 2017 03:17PM
South Africa's Democratic Alliance (DA) opposition party leader Mmusi Maimane speaks to journalists after the failure of a vote of no-confidence in South Africa's president Jacob Zuma on August 8, 2017 in Cape Town. (Photo by AFP)
South Africa's main opposition party said Wednesday it will propose that parliament be dissolved and early elections be called after the country's president survived the most serious attempt yet to unseat him.
Voting booths are brought into the South African parliament to allow Members of Parliament to vote for or against the motion of no-confidence against South African president, Jacob Zuma (not pictured) in the South frican parliament, on August 8, 2017, in Cape Town. (Photo by AFP)
South Africa’s Zuma survives no-confidence vote
South African President Jacob Zuma has survived a no-confidence vote in Parliament.
S Africa's Zuma leaves rally after boos from crowd
Zuma was seen hastily leaving the podium and being whisked away in a motorcade from the rally in the central city of Bloemfontein.
South Africans hold protest against Zuma
Thousands of South Africans stage a protest in the capital Pretoria, demanding the resignation of President Jacob Zuma.